DARYEELKA HABOON IYO BEERITAANKA BEERTA BEERTA - SOOSAARKA DALAGGA
Calla had iyo jeer soo jiidatay qaab aan caadi aheyn ee ubaxyada, muuqaalka qurxoon iyo caraf aan caadi ahayn. Laakiin beeralayda ubaxa waxay jecel yihiin xaqiiqda ah in ubaxa si fudud loo kori karo labada beerta iyo dheriga guriga. Mid kasta oo ka mid ah kiisaskaas, calla waa warshad aan qarsoodi lahayn.
Beerta lagu beeray beerta guga
Wicitaanada beeraha ee dhulka furan waxaa lagu fuliyaa oo kaliya guga. Beerta xilliga dayrta waxay soo jeedinaysaa jiilaalka dhulka, iyo nidaamka xididka dhirta uma dulqaadan karo tani.
Ma taqaanaa? Calla wuxuu ka kooban yahay caleemaha dhirta dilka ah, oo ka mid ah qoysaska aruumta. Goobta dabiiciga ah ee koritaanka waa carrada qoyan ee Koonfurta Ameerika iyo Afrika. Qoyska ugu dhow ee ku yaalla waqooyiga dhexe waa calla (wicitaanka marsh).
Xulashada goobta iyo waqtiga ugu wanaagsan ee soo degitaanka
Inkastoo calla uu yahay mid aan la qabin, waa arrin adag in la doorto meel. Waa inay ahaato hooskii ama penumbra, laakiin leh qadar balaadhan oo iftiin leh. Iska hubi in xilliga qorraxda ee ubaxku uusan gubin safarka tooska ah ee qorraxda, haddii kale caleemaha warshadu way engegi doonaan oo qalalan yihiin. Waa suurad wacan in ubax uu ku koray hooska dhirta ama duurka. Sidoo kale xasuuso in callas-ka aanu u dulqaadan karin si fiican.
Ma jecla daawada biyo joogta ah. Sidaa daraadeed, dhulka dhulka hoostiisa ku yaal waa inuu ahaadaa meel fog, dhulkana laftiisu ma aha inuu gacan ka geysto joojinta biyaha. Ciidda ka hoosaysa dhirta waa inay lahaataa dheecaan wanaagsan oo noqda waxoogaa acidic ah. Ciidda ugu fiican ee ubaxa waxay u dhigantaa marka loo siman yahay qajaar caleen isku dhafan, peat, ciid iyo ciid beerta.
Ma taqaanaa? Calla wuxuu leeyahay magac rasmi ah - zantedeskiya. Xitaa marmarka qaarkood waxaa loo yaqaan 'rihardia' ama 'calla'. Magaca labaad ee warshadda waxaa bixiyay khabiir Jarmal Kurt Sprengel. Wuxuu siiyay ubax magaca beerta talyaaniga Giovanni Zantedeschi, oo ahaa saaxiibkiisa. Magacani ma aha mid aad ujooga wareegyada ubaxa, iyo dhirta waxaa badanaa lagu magacaabaa calla.
Su'aasha kale ee muhiimka ah: marka la soo saaro callas meel dhul furan. Waqti ayaa la doortaa marka barafka ugu dambeeyey uu istaago iyo hawada iyo dhulka diirimaad si kulul. Sida caadiga ah, tani waa bilowga Maajo.
Wixii beereed waa lagama maarmaan in la doorto digriiga xooggan oo xoog leh ee dhirta. Iyo kuwa ay ka weyn yihiin, fursadaha dheeraad ah si ay u arkaan ubax sanadka ugu horeeya ee beerto. Digriiga qoyan iyo kuwa yaryar ayaa laga yaabaa inaanay aheyn mid waxtar leh. Isla markiiba digriiga lagu beeray dhulka laguma talinayo, waa inay noqdaan kuwo hore loo daweeyey. Sidaa darteed, haddii aad soo iibsatay Febraayo, wax beerto waa in lagu duuduubaa maro iyo meel hoose ee qaboojiyaha.
Inta kale ee diyaarinta ee loo beerayo nalalka calla wuxuu ka kooban yahay in lagu hayo digriiga ee xal daciif ah oo ah kiniinka potassium iyo dib-u-kicinta ku xigta. Meelaha la gooyey iyo kuwa la gooyey ayaa si taxadar leh loo gooyaa, jarista ayaa lagu daaweeyaa rinjiga cagaaran. Ka dib, waxay diyaar u yihiin in lagu beeray dhul furan.
Beerta qaar ka mid ah ku dhaqmaan abuurka hore ee wax beerto ee dheryaha - in March-April. Nalalka waxaa lagu beeray dheriyo gacmeed si gaar ah loo diyaariyey: weelasha waa horay loo kala duddo oo ciidda lagu kariyaa foornada. In substrate digriiga ayaa la rusheeyaa 2-3 cm oo waraabiyaa hal mar ama laba jeer toddobaadkii. Laga soo bilaabo Abriil waxaa laga qaadi karaa balakoonka ama aqalka dhirta lagu koriyo si loo soo tooso. Dhirta transplanted ee dhulka u furan kubad ballaaran.
Waa muhiim! Wacitaanka, dheriyada qurxoon waxaa loo doortaa si loo hubiyo in hawo ku filan hawada. Waxaa muhiim ah in dhirta kale aysan ku korin dheriga ama u dhow - calla ayaa ka masayr ah deriskeeda. Wakhti ahaan, lakabka ugu sareeya ee ciidda si taxadar leh ayaa loo saaraa si looga fogaado waxyeelada ka soo baxa, oo aad ku rushaysaa cusub.
Diyaarinta goobta loo beero
Goobta meesha calla waa inay koraan, waa la nadiifiyaa oo la qodaa substrate ah ciid iyo humus adag, oo loo qaaday qaybo siman. Hubi in ciidda uu leeyahay dheecaan wanaagsan. Tan iyo calla wuxuu jecel yahay carrada yar oo dhan, waxaa haboon in lagu daro cirbado yar oo ciidda agagaarka goobta beeritaanka. Waxay soo jiidan doontaa dhul-waynta, taas oo gacan ka geysata qulqulka carrada. Sidoo kale diyaariso bacriminta macdanta culus, oo ah in lagu daboolo 30-40 garaam halkii mitir oo dhul ah.
Digriiga digriiga ah ee goobta
Marka la beerto callasta beerta ee dhulka furan, si taxadar leh uga saari dheriga si aanay u dhaawici digriiga, maadaama ay yihiin kuwo aad u jilicsan. Waxay ku qoyan yihiin godadka hore loo kariyey ee qiyaastii 5-10 cm qoto dheer. Masaafada u dhaxeysa waxay ku xirantahay baaxadda guluubka, laakiin kama badna 40 sm. Maadada looxa laguma talinayo in la riixo dhulka, laakiin wax yar uun baa lagu rusheeyaa xagga sare, haddii kale xididada way qudhmi karaan.
Dhirta lagu beeray waa in si fiican loo waraabiyaa, dhowrka toddobaad ee soo socda ma daryeeli karaan waraabinta. Haddii laba todobaad ka dib foosto aan muuqan, waxaa lagama maarmaan ah in la qoyo ciidda agagaarka daloolka si aysan biyuhu u dhicin digriiga naftooda, oo qudhmi kara.
Waa muhiim! Fog of biqilka ee toddobaadyada hore waa in aan cabsi. Warshadu ma fidiso ilaa ay ka dhigto nidaamka asaasiga ah, tanina waxay qaadan kartaa ilaa hal bil. Calla sidoo kale Blooms muddo bil ah.
Sida loo daryeelo calla beerta
Calla Agrotehnika waa mid aad u fudud. Waxay u baahan tahay in la waraabiyo oo la daboolo si joogto ah ka dib, iyada oo la eegayo xaaladaha ku filan iftiinka iyo kuleylka. Haddii aad dalbato bacrimin markaad beerto, markaa mabda 'ahaan, quudin dheeraad ah looma baahna. Haddii aad soo jiidato goobta bogagga hore ee dhulka, ka dibna dabacsanaan lagama maarmaan noqon karo, inkastoo ay ka fiicantahay inaad tan sameyso ka dib markaad waraabiso.
Ma taqaanaa? Roobka ka hor, dewdrops muuqaalka caleen iyo talooyin caleemaha cagaaran ee calla in duubaan inflorescence.
Haddii bacarimiso waa lagama maarmaan, bacrimin waa in lagu soo xulo ubaxyo buluug ah, oo loo baahan yahay in la mariyo labadii usbuucba mar. Marka geedka blooms, ku dar 15-20 g of potassium ka yar baadiyaha kasta. Waxaa muhiim ah in aan ku dhaafin bacriminta leh bacriminta-yar oo ay ku jiraan, waxay ku kordhinayaan kordhinta cagaarka geedka.
Su'aal aad u muhiim ah - sida biyaha loo waco? Waxay jecel yihiin qoyaan, laakiin ha u dulqaadanin marka biyuhu istaagaan. Sidaa darteed, mid ka mid ah waa in aan u ogolaan xad-dhaaf ah ee ciidda, laakiin sidoo kale ma aha lagama maarmaan in lagu shub digriiga.
Ma taqaanaa? Laga bilaabo beeritaanka ubax callas ubax la yiraahdo caleen ah oo ku dhajiya boogta of inflorescence iyo laga yaabaa midab kala duwan. Xaqiiqdii, ubaxa dhirta, inkastoo kareysa, laakiin aan shaacin.
Si kicin koritaanka baadiyaha, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo caws ubax oo dhan ka dib xilliga ubax. Isla mar ahaantaana, caleemaha dhalinyarada waa inaan la taaban. Haddii aad si habboon u daryeesho calla, waxaad ku kici doontaa dabaacad.
Faa'iidada ubaxa waa cayayaanka dhif ah ama cudurada muuqda. Mararka qaarkood caddaanku waxay u muuqan karaan, laakiin ma waxyeelo weyn u geysanayaan geedka.
Siyaabaha loo waco calla
Abuuritaanka calla waxay kuxirantahay nooca dhirta. Qaar waxay leeyihiin rhizome xoog leh jilicsan, kuwa kale - digriiga xoog leh. Xaaladda dambe, dhalmada waxaa lagu fuliyaa iyadoo la beerto alaabta la beerto. In kale ah - by qaybinta baadiyaha. Laakiin labadoodaba waxaa lagu faafin karaa farcan. Run, tani waa dhibaato aad u adag oo aan la isku halleyn karin.
Ma taqaanaa? Waxaa jira sideed sideed oo kaliya oo ah noocyada ubaxa ah, kuwaas oo saddexda oo kaliya lagu beeray: Wadanka Itoobiyaanka ah, Qaar ka mid ah Wadanka. Inta soo hartey waa badeecada taranta.
Wareegidda, wax soo saarka waxaa lagu iibiyaa dukaamo khaas ah, halkaasoo ay ku socoto iibka dhamaadka bisha Febraayo. Ka dib markii la doorto digriiga adag, cufan iyo digriiga oo dhan, ku rid meel sax ah iyo meel meel qabow leh heerkul ah 5-7 ° C. Xilliga hawada oo dib u rog.
Si loo beero digriiga ku jira dheriyada waaweyn waa inay ahaataa Abriil. Tuber kasta wuxuu leeyahay tubercle muuqaal ah, oo ah kan sare ee warshadda. Qalbadda wax soo saarka ee substrate by 2-3 cm, kula saydhaa leh dhulka iyo soo qaado qol leh heerkul ah 20-22 ° C. Hubi in ciidda ku jirta dheriga uusan qalajin, laakiin ha ku shubin.
Si tartiib ah uga soo qaad dhererka balakoonka ee adag. Waxa suurtagal ah in lagu beero geedka dhul furan dhamaadka guga ama bilowga xagaaga. Nidaamka degitaanka wuxuu ku xiran yahay darajada. Ubaxyada yar yar, beeray fogaan ah 20 cm, dhexdhexaad ah - 35 cm, sare - 50 cm.
Nidaamkani wuxuu ku habboon yahay noocyada kala duwan ee wicitaanada Itoobiyaanka ah iyo derajooyinka kale. Waxaa suurtogal ah in loo qeybiyo baadiyaha xilliga dayrta ee qashinka lagu qorsheeyey. Kacsiga oo la socdo rhizome waa kala soocaan baadiyaha caamka ah, isku dayaya inaad badbaadiso dhulka intiisa badan ee suurtogalka ah, oo lagu beeray dheri leh isku dhafan gaar ah. Dheriga waa in lagu dhejiyaa qolka xiran oo leh heerkul ah 12-15 ° C iyo qoyaan badan. Guga hore, caleemaha ugu horeeya waa in ay muuqdaan, iyo bilowgii xagaaga geedka diyaar u yahay in la beero dhul furan. Waxyaabaha lagu beero ayaa sidoo kale laga iibsan karaa baqshiish kasta.
Kalluumaysatadu waxay inta badan ku hawlan yihiin soo saarida abuurka calla. Haddii aad taas ku sameysid guriga, waxaa jira macquul sareeya in miraha aan korin doonin. Kordhinta fursadaha guusha ayaa gacan ka geysanaya in la xoojiyo xalka biostimulating 5-6 saacadood. Inta badan, humate potassium waxaa loo isticmaalaa ujeedadaas. Ka dib markii lagu diiriyo abuurka waxaa la dhigaa digsi qoyan, kaas oo la dhigo 6 ilaa 8 maalmood meel diiran. Hubi in miraha aan qalalayn. Sida ugu dhakhsaha badan Gagaashan, waa in lagu meeleeyo dhulka iyo koray qol diiran ilaa caleemaha xooggan u muuqdaan. Kaliya marka dhirta la xoojiyo, waxaa lagu beeray dhul furan. Haddii aad ku beeranayso abuurka la kariyey, marxalad this, inta badan waxay u dhintaan.
Sida loo keydiyo digriiga calla ee jiilaalka
Dad badan ayaa su'aal ah, waxa la sameeyo calla ka dib markii ubax, sababtoo ah dhirta waa mid aad u kulul. Runtii uma dulqaadanayo garoomada, sidaas darteed dhamaadka bisha Sebtembar waxaa lagula talinayaa in la qodo rhizomes iyo, la socota qoryaha dhulka, iyaga ku hay meel qabow, marmar qoyaan ciidda.
Wareegyada tuberous waa in la qodo iyadoo aan laga gooyin qaybta dhulka dhammaadka Sebtembar. Waxyaabaha waa in laga saaraa dhulka, si fiican iyo si tartiib ah u biyo raaci, si aanay u waxyeeleynin geedka. Taas ka dib, nus saac ayaa lagu hayaa xal xummo kiriim ah oo mar kale maydhay. Kadibna waxaa lagu meeleeyaa meel qabow leh heerkul ah 5-10ºC oo sug ilaa inta caleemaha oo dhan la qalajiyey oo la qalajiyey. Ka dib markii la soo saaro, iyo digriiga ayaa loo diraa kaydinta.
Sidee loo kaydiyaa callas? Bacaha waraaqaha ah ee hoose ama sanduuqa khudradda ee qaboojiyaha. Roobka dhagaxda ee Itoobiya waxaa lagu kaydiyaa kaydinta, ka dib marka la raaco nidaamka isku midka ah. Inta lagu jiro xilliga qaboobaha, si joogto ah u hubi xaaladda xaaladda beeraha. Iska hubi in aan lahayn meelo jilicsan, oo aan jirin wax la isku qalajiyey oo la qalajiyey. Tani waa habka kaliya ee loogu diyaargaroobo beeritaanka guga.
In kasta oo xaqiiqda ah in kaydinta callas u baahan yahay qaar ka mid ah qiiro, beeritaanka warshad beerta iyo daryeelidda waa mid aad u fudud. Waa mid aan qarsoodi lahayn, oo aan xiiso lahayn cayayaanka. Laakiin muddada ubax ee ubaxa wuxuu ku faraxsan yahay ubaxyo qurxoon oo cajiib ah.